लोक सेवाले खोल्यो सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन, मंसिरदेखि परीक्षा - Yessamachar
लोक सेवाले खोल्यो सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन, मंसिरदेखि परीक्षा
लोक सेवा आयोगले लामो समयपछि संघीय संसद, निजामति सेवा र स्वास्थ्य सेवातर्फ सहसचिव तथा उपसचिव पदका लागि आवेदन खुला गरेको छ।
राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वीतीय श्रेणी (प्राविधिक/अप्राविधिक), स्वास्थ्य सेवातर्फ नवौं र एघारौं तहका पदका लागि बुधबार आयोगले विज्ञापन खुलाएको हो।
एक सय ८० भन्दा बढी सहसचिव र चार सय ५० भन्दा बढी उपसचिव पदमा आयोगले आवेदन मागेको छ। अधिकांश कोटा बढुवाबाट पदपुर्ति हुने खालका छन् भने खुलामा थौरैमात्रै सिट छन्।
कोरोनाभाइरस महामारीपछि गत चैतदेखि आयोगले आवेदन खुला गरेको थिएन।
पहिलो चरणका परीक्षा दिएकाहरूको दोस्रो चरणका परीक्षा पनि महामारीले स्थगित थियो।
आयोगले आज खुलाएको विज्ञापनअनुसार परीक्षाका लागि कात्तिक १८ गतेसम्म फारम भरिसक्नु पर्नेछ।
आयोगको वेवसाइट https://psc.gov.np/ मा गएर अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिनेछ।
परीक्षा मंसिरदेखि सुरू हुनेछन्।
आयोगले २०७७ कात्तिक १८ गतेसम्म २१ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिकले फारम भर्न सक्ने बताएको छ। तर स्थायी निजामति कर्मचारीका हकमा भने उमेरहद लागू छैन।
आयोगले कोरोना महामारीकै बीच आवेदन खुला गरेपछि यसको आलोचना भइरहेको छ।
महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले कोरोना संक्रमितमाथि पीडा थप्ने गरी आयोगले मापदण्ड ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
‘लोक सेवाले आफूले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा कोरोना संक्रमितहरू सहभागी हुन नपाउने गरी ल्याएको मापदण्ड अन्यायपूर्ण छ। यो निर्णयले संक्रमितमाथि दोहोरो पीडा थोपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ,’ उनले भने।
‘अहिलेको समयमा जुनसुकै बेला जो कोही पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्ने अवस्थामा ल्याइएको यो प्रावधानका कारण धेरै विद्यार्थीहरु आयोगको परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुन सक्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘यो विभेदकारी र अन्यायपूर्ण मापदण्डलाई तत्काल सच्याउन सरकार, आयोग समक्ष माग गर्दछौं।’
कोरोना संक्रमण हुनु अपराध नभएकोले आयोगले परीक्षाको लागि व्यवस्थापन मिलाउन नेविसंघले माग गरेको उनले बताए।
‘कोरोना संक्रमित हुनु आफैंमा अपराध होइन, संक्रमित भएकैमा परीक्षा दिन पाउने हकबाट वञ्चित गर्नुचाहिँ अपराध हो। विद्यमान उमेर हदको प्रावधानबमोजिम आयोगको तयारी गरेको साल परीक्षा दिन नपाउँदा विद्यार्थीको जीवनवृत्ति प्रभावित हुने मात्र होइन सरकारी जागिरको ढोका नै बन्द हुने अवस्थातर्फ सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ,’ उनले भने।
आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आयोगले ल्याएको मापदण्ड परिमार्जन गर्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए।
कोरोना संक्रमितलाई किन परीक्षा दिने व्यवस्थापन गर्न आयोगले नसकेको? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘संक्रमण कापीबाटै पनि सर्न सक्छ। कयौं दिन रहन सक्छ। कापी जाँच गर्नेको मानव अधिकार हनन् हुन्छ कि हुँदैन?’
कोरोनाका बिरामीलाई अस्पतालले पनि विशेष व्यवस्था मिलाएरमात्रै भर्ना लिने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष मैनालीले संक्रमण रोग ऐनले समेत कोरोना संक्रमित यताउता हिँड्न नहुने उल्लेख गरेको बताए।
‘उहाँहरूको परीक्षा नछुटोस् भन्नेमा आयोग संवेदनशील छ,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमितलाई परीक्षामा सहभागी गराउन हामीले विभिन्न कोणबाट हेरिराखेका छौं। अहिलेसम्म उपाय पत्ता लागेको छैन।’
उनले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई परीक्षा केन्द्रकै व्यवस्थापन गर्नसमेत समस्या पर्ने बताए।
‘कोरोना बिरामी भनेपछि परीक्षा केन्द्र राख्न हामीलाई स्कुलहरूले दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘तयारी अवस्थामा कर्मचारीलगायत जनशक्ति पनि छैन।’
यसअगाडिका परीक्षाहरूमा पनि उम्मेदवार छुटे पनि यस पटक भने धेरै हल्ला भएको र मिडियाले पनि चासो राखेको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ।
‘ठूलो परीक्षा बारबार लिन सकिँदैन। अन्तर्वार्ता बरू केही समय पर्खेर लिन सकिन्छ। लिखित परीक्षा एउटै पेपर एकै समयमा हुने भएकोले त्यस्ता प्राविधिक रूपमा अप्ठेरा छन्,’ उनले भने, ‘प्रहरीले अस्ति भर्खरै २५/२६ सय जनाको प्रहरी निरीक्षकको परीक्षा लियो। पिसिआर रिपोर्ट नै माग्यो। त्यसबेला मिडियाले चासो दिएन। मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा भयो हल्ला भएन। आयोगको परीक्षामा मात्रै किन यस्तो चासो भइरहेको हो मैले बुझेको छैन।’
उमेर हदले गर्दा विरोध भएको हो कि! भन्ने प्रश्नमा उनले गत वर्ष आयोगले कुनै पनि विज्ञापन नगर्दा कतिको उमेर हद सकियो होला? भन्ने प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
‘एक चरण छनौट भएर बसेकाहरूका लागि यो परीक्षा गर्न लागिएको हो। उमेर नाघ्ने बेला भएकै व्यक्तिलाई कोरोना भयो र परीक्षामा सहभागी हुन सकेन भने त्यो दुर्घटना हो,’ उनले भने।
कोरोना संक्रमण भइरहेकै अवस्थामा परीक्षा दिन सकिने गरी आयोगले कुनै व्यवस्था भोलिका दिनमा गरेमा जानकारी गराइने पनि उनले बताए।
Previous articleपोखरामा स्याङ्जाकी कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु
Next articleकाठमाडौंमा ९९६ सहित उपत्यकामा १४०३ संक्रमित थपिए